Faritra afaka haba : mitohy ny fiaraha-midinika amin’ny fanjakana | NewsMada
Faritra afaka haba : mitohy ny fiaraha-midinika amin’ny fanjakana
Notsiahivin’ny mpitantana ao amin’ny faritra afaka haba iray ny efa fisian’ny fihaonana teo amin’ny filohan’ny fikambanana faritra afaka haba, Charles Giblain, sy ny minisitry ny Indostria, Tazafy Armand, ny volana oktobra lasa teo. Malaza mantsy, araka ny fampahalalam-baovao sasany, fa mandeha ila ny fehinkevitra raisin’ireo faritra afaka haba. Nambara tamin’io fihaonan’ny minisitra sy ny filohan’ny GEFP io ny fiaraha-midinika eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina momba ny tontolon’ny indostria, mijery ny tombontsoan’ny roa tonta.
Niarahan’izy ireo nidinika izay lohahevitra rehetra hanamafisana ny fiaraha-miasa, fanjakana sy tsy miankina, hahitana fahombiazana. « Marina fa misy ny olana fa tsy tokony hatao ambanin-javatra koa ny hanatsarana ny hoavin’ny orinasa rehetra », hoy i Charles Giblain. « Tsara hitohy hatrany izay dinika eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina izay hanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana sy hisian’ny fifampitokisana », hoy ihany i Charles Giblain. Andraikitry ny fanjakana rahateo manohana ny sehatra tsy miankina.
Tsara ho fantatra fa mampitombo ny vola vahiny miditra avy amin’ny fanondranana entana any ivelany ny GEFP, manatsara ny toekarem-pirenena ankapobeny. Mahatonga ny minisiteran’ny Indostria mijery ny olana rehetra sy ny fomba fanamoràna ny asan’ireo orinasa tsy miankina izany.